Wac khadka taleefoonka ah 1-844-234-4950 haddii…
Waxaad u baahan tahay inaad dib u dhigto ama bedesho lambarkaaga PIN.
Isbedel PIN marka hore, ka dibna wac WIC Barnaamijkaaga isla markiiba! Waxay joojin doonaan qof kasta inuu isticmaalo dheefahaaga cuntada oo kaa caawiyo inaad hesho kaar cusub.
Gargaarka cuntada ee hadda lagu bixiyo xafiiska WIC ayaa isla markiiba heli doona. Faa'iidooyinka Cuntada ee bilaha soo socda waxay kuugu soo dhigi doonaan kaarkaaga eWIC badhtamaha saqda dhexe taariikhda bilowga ah waxayna dhacaysaa bartamaha badhka taariikhda dhammaadka.
Guji hoos si aad u aragto liiska cuntada Colorado WIC ee ku qoran Ingiriis ama Isbanish.
Meesha laga iibsado Enfamil
Soo raadi dukaamada
Isticmaal ikhtiyaarka "Faa'iidooyinkayga" barnaamijka WICShopper si aad u eegto faa'iidooyinkaaga hadda.
Booqo www.ebtedge.com si aad u aragto una daabacato dheelitirkaaga.
Kaar kaarkaaga eWIC ka hor inta aanad bixin nooc kale oo lacag ah.
Miisaaniyada haray waxaa lagu bixin karaa lacag caddaan ah, EBT, SNAP ama nooc kale oo lacag ah oo lagu iibsado dukaanka.
Booqo akoonkaaga internetka www.ebtedge.com.
Ha isku dayin inaad ka fikirto lambarkaaga PIN. Haddii PIN-da saxda ah aan la galin isku dayga afraad, PIN-kaaga ayaa la xirayaa. Tani waxaa loo sameeyaa sidii looga ilaalin lahaa qof kugula talinaya PIN iyo helitaanka faa'iidooyinkaaga cuntada. Si aad u furto kaadhkaada ilaa saacadda saqda dhexe iyo koontadaada si toos ah ayey u furan tahay.
Si aad u fayl garaysato cabasho barnaamij ku saabsan takoorid, buuxi Foomka Ashtakada Kala-sooca ee Barnaamijka USDA, (AD-3027) oo laga helo barta internetka: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, iyo xafiis kasta oo ka tirsan USDA, ama ku qor a warqad loo diray USDA oo ku qor warqadda dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. Si aad u codsatid nuqul ka mid ah foomka cabashada, wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga ama waraaqdaada oo dhammeystiran USDA adoo:
(1) boostada: Wasaaradda Beeraha Mareykanka
(3) emayl: program.intake@usda.gov.